(Dhageyso) R/Wasaaraha oo soo dhaweeyay go'aanka xildhibaanada baarlamaanka. | Allgalgaduud.Com
Home News Archive (Dhageyso) R/Wasaaraha oo soo dhaweeyay go'aanka xildhibaanada baarlamaanka.
(Dhageyso) R/Wasaaraha oo soo dhaweeyay go'aanka xildhibaanada baarlamaanka.
Muqdisho, 17, January, 2015….Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke, ayaa soo dhaweeyay go’aankii ay mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya ku aqbaleen codsigiisii 16/01/2015
ee dib ula noqshada magacaabidda Xubnaha Gollaha Wasiirada cusub, isagoo qadarinaya dareenka iyo shucuubta Xildhibaanada Golaha Shacabka iyo talooyinka guud ee ka soo gaaray bulshada Soomaaliyeed.
Hoos Ka Dhageyso Codka Afhayeenka: